Hood Inc ကို EditShare အတူ Productions အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၎င်း၏နယူးခေတ်သစ်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » EditShare အတူ Hood Inc ကို Productions အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၎င်း၏နယူးခေတ်သစ်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး
EditShare အတူ Hood Inc ကို Productions အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၎င်း၏နယူးခေတ်သစ်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး
စင္ကာပူႏုိင္ငံ - ဇွန်လ 17, 2019 - EditShare®စင်္ကာပူအခြေစိုက် Hood Inc ကို Productions (Hood Inc က) ဝန်းကျင်က၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အသိဉာဏ်စကေးထွက်သိုလှောင်မှုအတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင် AQC နှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ, EditShare XStream EFS နဲစကေးထွက် shared သိုလှောင်မှုချပြီးမီဒီယာဖြေရှင်းနည်းများ, ၎င်း၏မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆင်ရေး၏အဓိကမှာထုတ်လုပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပဋိညာဉ်သေတ္တာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထား Flow ။ ဆုရစီမံကိန်းများနှင့်ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များအစီအစဉ်များအတွက်လူသိများ စီးတီးငါးမန်း, နောက်ကောက်, နှစ်ချက် Trouble နှင့် Yolo Pronto, Hood Inc ကယင်း၏အစားထိုး အမွေ sneakernet နှင့်အတူထူထောင် EditShare'' s ကိုချိတ်ဆက်အခြေခံအဆောက်အအုံ။ အနာဂတ်မှာ-အထောက်အထား setup ကိုစီမံကိန်းများသူတို့ရဲ့ကြီးထွားလာစာရင်း၏ဖန်တီးမှုရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ Hood Inc ကိုအချိန်ပိုမိုပေးတစ်ဦးချိတ်ဆက်နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းဖျက်သိမ်း။
"Hood Inc ကစင်္ကာပူရဲ့အများဆုံးဆန်းသစ်သားသမီးရဲ့အစီအစဉ်များအချို့ကိုဖန်တီးထားပါတယ်နဲ့သူတို့ရဲ့ထူးချွန်အကြောင်းအရာအလုပ်များအချိန်ဇယားကိုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ သည်ဘဏ်ဍာနှင့်အတူ Hood Inc ကိုအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန် ဒီနေ့ရဲ့ဖိုင်ကို-based ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစီမံခန့်ခွဲကြောင်းနည်းပညာမူတည်ပြီးရမယ် အနာဂတ်မှာသို့ကြီးထွားဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူ Workflows, " ပတေရုသလမ်းဘတ်, ပွေးအရောင်းညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်, EditShare. "EditShare တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေး Hood Inc တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည် redundancy ပပျောက်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးပိုကြီးတဲ့ရေကူးကန်သို့အသာပုတ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာအလွန်အပြိုင်အဆိုင်နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ရွေ့လျားစျေးကွက်သည်အဘယ်အရာအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်ခွင့်ပြုကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက် tools များနှင့်အတူမြင့်မားအကျိုးရှိစွာ, အရွယ်မှာထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ။ "
Esan Sivalingam, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးအပေါ် Hood Inc ကိုမှတ်ချက်မှာ CEO နဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူ, "ကို set up အမွေအနှစ်နှင့်အတူ, ဝန်ထမ်းမကြာခဏစီမံကိန်းများအပြီးသတ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းထို့နောက်နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်များနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကို duplicating အတူတက်ချည်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့်မတတ်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်နှင့်အတူ EditShare မီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားသို့အချိန်အဖိုးတန်ကုန်စည်ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပြီ။ "
Deanna Tan က Hood Inc ကိုမှာ Post ကိုထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်းဖြည့်စွက်, "ကို With EditShareကစက်ရုံသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်, မီဒီယာ, လက်ျာန်ထမ်းအချိန်လေးမှချိတ်ဆက်နေသည်။ ကျနော်တို့ဆိုကို Workstation မှာထိုင်နှင့်နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်စီမံကိန်းခွဲဝေမှုမှတစ်ဆင့်အလွယ်တကူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်သူအယ်ဒီတာများမှတုံ့ပြန်ချက်များကို Flow ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ် EditShare ချဲ့ထွင်ရန်အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ ကျနော်တို့ကပိုသိုလှောင်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်သို့ရွှေ့ဖို့လိုအပ်သင့်ပါတယ်, တက node ကိုသို့မဟုတ် module တစ်ခုဖြည့်စွက်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြီးထွားအဖြစ်ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးများအတွက်အရေးပါသည်။ "
ထုတ်လုပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု Hood Inc ကိုရှာဖွေရေးကိရိယာများနှင့်အတူသိုလှောင်မှုနဲ့ archive ကိုရေကန်ကိုဖြတ်ပြီးတစ်လိမ္မာပါးနပ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာထောက်ပံ့စီးဆင်း, browse, အမြင် metadata ကို, log, Sub-ကလစ်များဖန်တီးအမှတ်အသားများထည့်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လက်ထောက်လျင်မြန်စွာကွက်ကိုစုဝေးသို့မဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ NLE သို့ဖိုင်တွေရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးအယ်ဒီတာများအားဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်သည့်စီမံကိန်းများ, ဖိုလ်ဒါနှင့်ပာသို့မီဒီယာစည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ XStream EFS နဲ shared သိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်း၏အဆင့်မြင့်စီမံကိန်းအားခွဲဝေမှုစွမ်းရည်စီမံကိန်းများအပေါ်ပူးပေါင်းနှင့်လျင်မြန်စွာဇာတ်လမ်းများတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှအယ်ဒီတာများကို enable ။ သေတ္တာတော်သည်နောက်ဆုံးအထွက်မှစားသုံးမိရာမှတစ်ဦးအပြည့်အဝချိတ်ဆက်လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံ backup လုပ်ထားနှင့်သိမ်းဆည်းနှင့်အတူအဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာထွက်စာရငျး။
ဇော်ဂီရောင် အဆိုပါမော်ကွန်းတိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းများမှာဘယ်မှာ tier သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်မှတ်ချက်များ, "သေတ္တာတော်နှင့်အတူ, ငါတို့သည်ငါတို့၏ XStream EFS နဲ server ကိုချွတ်အကြောင်းအရာရွှေ့နိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကမှတ်မိသေးတယ်။ ဒါဟာနားမှာပေါက်သောမြက်ပင်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကြွလာသောအခါဤသည်အလွန်အရေးပါသည်။ ရှေ့မှာ Editshareကျနော်တို့ (Backup တွေကိုကဲ့သို့) နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော hard disks မှာသိမ်းထားတဲ့နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်နှစ်ခုမိတ္တူအမြဲရှိချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကစာရင်းဇယားများတွင်မီဒီယာ contents တွေကိုခြေရာခံနေခဲ့တယ်။ အဆိုပါ archive ကိုကနေ content တွေကိုဆွဲထုတ်, ငါတို့အယ်ဒီတာများအနေနဲ့ Excel စာရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကို manually စီမံကိန်းပါရှိသောသို့မဟုတ်စီးကျလာတယ်သော hard disk ကိုရှာဖွေ, ပြီးတော့အဓိကသိုလှောင်မှုမှမီဒီယာကော်ပီကူးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ယနေ့တွင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ ရိုက်ကူးရေးကိုပြီးစီးခဲ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျနော်တို့စနစ်သို့ input ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်တတ်နိုင်သမျှလူတိုင်းအကြောင်းအရာ browse နိုင်အောင် Flow သို့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အဘို့နှင့် EFS နဲ shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေါ်သို့အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ပေးပါ။ ငါတို့သည်လည်းတစ်ပြိုင်နက်ချက်ချင်းကို backup လုပ်ထားမိတ္တူပေးခြင်း, သေတ္တာထိုသို့အချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်။ မတိုင်မီနှင့်မတူဘဲမီဒီယာများ၏အားလုံးရည်ညွှန်းနှင့် metadata Flow, EFS နဲနှင့်ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာရှာဖွေအောင်ကိုအလိုအလျောက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ " Sivalingam အဆိုပါချိတ်ဆက်လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ကောက်ချက်ချ, "ဒါဟာသိသိသာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်ဍာအရှိန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းပါတယ်။" [စာသားထုပ်ပိုးပြီး Break] [စာသားထုပ်ပိုးပြီး Break]မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအပြင်, လုံခြုံရေးရွေးချယ်ခြင်း၌အခြားသောသော့ချက်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည် EditShare ဖြေရှင်းချက်။ အတိတ်ကာလ, Hood Inc ကိုကိုယ်တိုင်လက်လှမ်းကန့်သတ်ရန်တစ်ဦးချင်းစီ drives တွေကိုပေါ်သို့အကြောင်းအရာများကူးယူရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမောင်းနှင်ချဉ်းကပ် EditShare အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဘယ်အရာကိုအကြောင်းအရာနှင့်အခါ, လုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြှင့်ရယူနိုင်သူကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို EditShare XStream EFS နဲ, သေတ္တာသိမ်းဆည်းခြင်း, Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အခြား EditShare ဖြေရှင်းချက်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.editshare.com.
မြင် EditShare မှာဖြေရှင်းနည်းများ BroadcastAsia 2019, ရပ် #6E4-01
တက်ရောက်တစ်ဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကသရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် EditShare ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းအသွားအလာကျွမ်းကျင်သူ EditShare ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ဦးပထမဦးဆုံးလက် [အီးမေးလျ protected] ဒါမှမဟုတ်ရပ်တည်ချက်အားဖြင့်ရပ်တန့် #6E4-01 ဇွန်လ 18th-20th အပေါ် BroadcastAsia, Suntec City, စင်္ကာပူအတွက် Suntec စင်္ကာပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း & ပြပွဲ Center မှာ 2019 မှာ။
© 2019 EditShare LLC ။ All rights reserved ။ EditShare®တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် EditShare.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း EditShare EditShare မီဒီယာဖြေရှင်းနည်းများ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Hood Inc မှ post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-06-17
ယခင်: DTC အသံလွှင့် Nano HD ကို RF နီဇ် skyrunning ပွဲအတွက်ချထား
နောက်တစ်ခု: WFIE, JVC ProHD စတူဒီယို 4000S လွှစတူဒီယိုနှင့်အတူ Breaking News, Web Content တိုက်ရိုက်အားကစားကိုပိုကောင်းစေ